Inhloko Zendaba ZesiNdebele, Nkwenkwezi 9, 2018
********** Umkhokheli weMDC-T uMnu Nelson Chamisa osekwethekeleleni eNgilande lequla lakhe lomanyano weMDC Alliance eligoqela uMnu David Coltart lokhe behlangana lenkokheli yalelo lizwe labosomabhizimusi.
********** Umsakazi obelodumo esebenzela umsakazo weZBC u Laurence Simbarashe owayesawiza ngelinye igama lakhe lemidlalo yokulingisa yama drama ngokuthi Bhonzo obhubhe ngoMgqibelo ubekwe namhlanje ebuthanelwe linengi lalabo asebenza labo eZBC..
********** Izakhamizi zeGwanda zikhuthaza uhulumende ukuthi angenele edabeni lukasomabhizimusi uWicknell Chivayo owehluleke ukusukumisa umsebenzi wokuletha amandla kagetsi awelanga awe solar eGwanda owaphiwa inkampani yakhe eyeIntratek.
******** kwezemidlalo… Iqembu lenguqu ele Toronto FC elingene esigabeni seSouthern Region kuDivision One Soccer League lapho elihlezi emsileni engalaneni yemiklomelo lithi isikhathi sisesekhona sokuthi lizithuthukise lisuke esibanengi elikiso.
********** KuLivetalk lamuhla kuhlelo olwe “Diaspora Forum” sixoxa ngokwethekelela okwenza iqula leMDC Alliance likhokelwa nguMnu Nelson Chamisa kweleBhilithani, ukuthi limihlangano itshoni abayenzayo lenkokheli yalelo lizwe. Thumelani imilayezelo yenu ku WhatsApp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kuStudio 7 ngo half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 am, 4930, 6040 laku 15460 kilohertz kuShortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsapp lakuFacebook ku VOA Ndebele.
Inhloko zendaba, Nkwenkwezi 09, 2018